Hafatry ny Aumôniers – FJKM
HAFATRY NY AUMONIERS NY ZOMA 13 AOGOSITRA 2021
*Fisaorana ny Mpiandraikitra Foibe nanome sy naneho fitokisana anay
*Fisaorana ny Synoda nandray anay
-Niaina anatin’ny fandrosoan’ny teknolojian’ny serasera isika kanefa isika mpamonjy Synoda izao: na Mpitandrina, na Diakona , na Mpiandry na Katekista tonga aty dia samy efa nanao fanekena hitazona tsiambaratelo ka tokony hitandro ny firaisan’ny Fiangonana tsy ho simba.
Tsy azo ialana ny serasera kanefa tsy tokony hatao fitaovana hampisavorovoro akory izany: andro vitsy izay, ohatra, dia niely tamin’ny alalan’ny facebook ilay lista misy ny anaran’ny olona tiana ho lany ho Biraon’izao Synoda Lehibe izao. Dia lany ny ¾ n’ireo tao anaty lista. Izany hoe: ny fanaon’izao tontolo izao no manjaka tanteraka ato anatin’ny Synoda: mahamenatra manala baraka fa tongo-bakivaky ka sady maharary no mahamenatr’ olona.Anton-dresaky ny maro, tsy ato anatin’ny Fiangonana ihany fa ivelan’ny Fiangonana indrindra koa, ary manerana izao tontolo izao izany. Ary efa misy sahady ny lisitr’ ireo hofidina ho MF koa hono miely any.
Koa miangavy izay nanao izany mba tsy hamoaka intsony zavatra miteraka fifampiandaniana sy fifampisarahana toy izany. Ary satria hiroso amin’ny fifidianana isika, dia handeha re samy hihaino sy hankato ny bitsiky ny Fanahy mba hitandrovana ny voninahitr’Andriamanitra. Ary koa “aoka ny olona rehetra halady hihaino, ho malai-miteny « (Jak.1:19).Zanaky ny mazava isika ao amin’i Jesoa Kristy, koa aoka handeha amin’ny mazava sady hiorina tsara amin’ny finoana araka ny teny fanevantsika: “Miorena tsara, aza miova” I Kor.15.58a
Amin’ny anaran’ny Aumôniers ny SL XIX
–Rabemila Yvette, Mpitandrina
-Rabehatonina James, Mpitandrina
–Rabenandrasana Lala Giselle, Mpitandrina